လမ်းလေးထဲက ..လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » လမ်းလေးထဲက ..လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲ	12
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Jan 8, 2016 in Arts & Humanities | 12 comments
၆၈ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးအားကစားပွဲ
စစခြင်းပဲ ဆေးရုံပို့လိုက်ရတဲ့ ကလေးတွေအတွက်စိတ်မကောင်းပေမယ့်
ယှဉ်ပြိုင်မှုအောင်ပွဲအတွက် ရရှိတဲ့ဆုသေးသေး ကို ၀မ်းသာအားရကြည်နူးနေတဲ့သူတို့ အပြုံးတွေအတွက်
ပြသနာအမျိုး မျိုးခေါင်းခံ ရှင်းရ ကျိုး နပ်လေတော့၏။။။
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: ခြောက်ပုံမြောက်က Max ပုလင်းနဲ့ အဒေါ်ကျီး က အတော်ဆုံး
အဒေါ်ကြီးမက်ကွ အဒေါ်ကြီးမက် ဟိုင်းယား..
ဈာန်​ says: ​ချောတိုင်​တက်​တာ သ​ဘောအကဆုံးဘဲ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .တီရှပ်နဲ့ဘောင်းဘီထဲလက်နှိုက်နေတာ “ဘီလူးကြီး” လား…
“ဘီလူးကြီး”ogre says: မှန်၏ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: လမ်းမပိတ်ကြတော့ဘူးပေါ့..။
“ဘီလူးကြီး”ogre says: တဂျီး ……….
မြန်မာနိုင်ငံသားပီသဖို့….လမ်းတော့ ပိတ်တာပေါ့ဗျ
အရင်အစိုးရလက်ကွက် တွေပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: .ဘီလူးဂျီး
“ဘီလူးကြီး”ogre says: ဥူးးကြောင်
အဆီးဗူးဆောင်……… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
alinsett says: …အော်… မြောက်ဥက္ကလာသားကြီးကိုး…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားရှေ့က ကိုဘီလူးကြီး ပုံလား
“ဘီလူးကြီး”ogre says: မှန်၏
ဖွင့်ပွဲ စစချင်းပြိုင်ပွဲမှာတင်….ရှိစုမဲ့စုရံပုံငွေထဲက